Pịa Gburugburu | ThatsLuck.com
Gba nzọ agbata obi na roulette
Pịa gburugburu bụ sọftụwia ọhụrụ roulette nke sitere na arịrịọ nke ụfọdụ ndị ọrụ, ndị jirilarị sọftụwia ahụ ► Roulette Turbo Clicker, ha gwara m ka m mepụta mmemme ịkụ nzọ tinyere nọmba ya n'akụkụ, nke a makwaara dị ka "ndị agbata obi".
Ya mere, "ndi agbata obi" bu ndi di nso na aka nri na aka ekpe nke onu ogugu "base" nke anyi choro igba oso.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkụ nzọ efu na nọmba 2 "agbata obi" ya, anyị ga-agbanye na nọmba 26-0-32, maka ngụkọta nke nọmba 3.
Gba nzọ dị nso bara ezigbo uru maka ndị na-ahọrọ egwuregwu na mpaghara roulette, ọ na-abụkarị na onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ikpuchi akụkụ buru ibu nke roulette na ekele Pịa Gburugburu ugbu a, enwere ike iru onye ọ bụla.
Esi hazi Pịa gburugburu
Pịa Gburugburu Ọ dị mfe iji, o zuru ezu iji malite ya na mgbe ịbanye koodu ọrụ, gaa nhazi mbụ nke tebụl egwuregwu, nhọrọ ndị yiri ezigbo ndị enyere maka ► Roulette Turbo Clicker.
Nakwa na Pịa Gburugburu n'eziokwu, ọ ga-ezu iji mee ka nhọrọ "Spacebar Config" wee banye na-akpaghị aka ntinye aka nke ọnụ ọgụgụ kapeeti, ọrụ na nkezi na-erughị otu nkeji.
Ozugbo ị banyere nhazi X / Y niile nke ọnụ ọgụgụ m na-atụ aro ka ịchekwa nhazi ahụ na bọtịnụ kwesịrị ekwesị ma anyị ga-adị njikere ịnwale sọftụwia roulette Pịa Gburugburu n’elu tebụl na-acha ndụ ndụ.
Nakwa na Pịa Gburugburu enwere nhọrọ maka pịa enwere ike adịchaghị o mgbe nzo, yana ị nwere ike ịtọ ọsọ nke clicks site na ịgbanwe nhọrọ ahụ Ké Pịa Speed na uche, iburu n'uche na 0 bụ ọsọ kacha na na 1000 nhata 1 abụọ n'etiti clicks.
Beting na Roulette na Pịa Gburugburu
Ozugbo ị mechara usoro a dị mfe (na ► YouTube o doro anya na ị ga-ahụ ihe ngosi vidiyo), ị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ Gbaa Clicker, iji gaa na pịa n'ezie.
Enweghi otutu ihe ị ga-akọwa ebe a, naanị kpalie onye na-pịa ihe na-amasị gị na ihuenyo ahụ, n'elu aka ekpe ị ga-ahụ nhọrọ Ndị agbata obi, ekele nke ị nwere ike ịhọrọ ole "ndị agbata obi" ị ga-nzọ na mgbakwunye na isi nọmba, ọ bụrụ n'eziokwu ịchọrọ ịkụ nzọ nọmba 5 na akụkụ ya abụọ, ya bụ, ngụkọta nke nọmba 5, họrọ 2 na Agbata obi igbe na pịa na green gburugburu kwekọrọ ekwekọ 5.
N'okwu a, a ga - atụnye nọmba 5, ya bụ nọmba isi gbakwunyere agbata obi abụọ ahụ n'aka nri ya na ndị agbata obi 2 n'aka ekpe ya.
N'elu aka nri ị ga-ahụ nhọrọ nkeji, Nke ahụ bụ ole nkeji ịkụ nzọ na nọmba ọ bụla.
M ga-ekwu na ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-agbakwunye, nke a bụ otu n'ime mmemme ndị a kpochapụla nke na-arụ ọrụ ya na-enweghị ọtụtụ nsogbu na nke doro anya na ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe maka ndị guzobere usoro ịkụ nzọ dabere na ngalaba roulette.
Pịa Gburugburu ọ-enye gị ohere nzọ a kacha nke a isi nọmba na ya 18 n'akụkụ aka ekpe na 18 n'aka nri, n'ihi ya, ọ nwekwara ike na-ekpuchi dum gbaa nke roulette wheel.
Nwee anụrị ma echefukwala ịdenye aha na chanel Telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụchalụ akụkọ niile ma ọ bụ nata ụfọdụ ego echekwara maka ndị otu.
Nbudata Nbudata	CAround.zip - 2 MB
Pụrụ Ime bbylọ